‘मिलाउन’ सक्रिय चार नेताको नजरमा को हुन् एमाले एकताका बाधक? – Panchakoshi Daily
पंचकाेशि संवाददाता । २०७८ जेष्ठ २६, बुधबार मा प्रकाशित
काठमाडौं– नेकपा एमालेको पहिलो पुस्ताका नेताको ‘प्रस्ताव–दोहोरी’ले एकताका लागि अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन। तर, ‘दोस्रो पुस्ता’ले एकता कायम राख्ने विषयमा हिम्मत हारेको छैन।
दुवै पक्षका गरी ८ जना नेताहरुले मंगलबार साढे ४ घन्टा संवाद गरे। संवादबाट आमजनलाई ‘सुनाउन जरुरी’ कुराको विकास त भएन। तर, एकताको प्रयास र सम्भावना सकिइनसकेको सन्देश प्रवाह गर्न उनीहरु सायद सफल भए। जुन सन्देशले कार्यकर्तामा एकताको आशा कायम राख्न सक्छ भने शीर्ष नेताहरुलाई दबाब सिर्जना हुन्छ।
एकताको अपेक्षासहित सक्रिय तर मंगलबारको बैठकमा अनुपस्थित एक नेता योगेश भट्टराईले बुधबार बिहान फेसबुकमा अर्थपूर्ण ‘स्टाटस’ लेखे। ‘एमालेको एकताको मुल जड?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए।
एकताका लागि सक्रिय भट्टराई मात्रै होइन, अन्य केही प्रभावशाली नेताहरु शीर्ष नेताहरुलाई मिल्न नदिन केही ‘तत्व’हरु सक्रिय रहेको निर्क्योलमा पुगेको देखिन्छ। उनीहरुले आन्तरिक र बाह्य रुपमै अहिले मिल्न नदिनेहरु सक्रिय भएको महशुस गरेका छन्।
त्यही कुरा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम आदिका माध्यमबाट प्रकट गरिरहेका छन्। ‘अतिवादी’, ‘सपेरा टोक्ने सर्प’, ‘लाभाकांक्षी’ जस्ता विशेषणबाट मिल्न नदिने तत्वतर्फ इंगित गरिरहेका छन् उनीहरु।
मिल्न उत्प्रेरित गर्ने साझा आधार
वैचारिक रुपमा प्रष्ट र सांगठिनक क्षमता भएकाहरुमध्ये पर्ने एमाले नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई एमालेबाट फुटेर जाँदा पनि नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्। तर, एमाले कमजोर हुँदा देशको राष्ट्रियता संकटमा पर्ने साझा निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको देखिन्छ।
त्यसैले यी चार नेता छुट्टाछुट्टै ठाउँमा बोल्दा पनि उस्तै टोन निस्केको देखिन्छ। गत जेठ ८ गते नेता घनश्याम भूसालले नयाँवानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दै गर्दा यस विषयमा आफ्नो बुझाइ प्रस्तुत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘नेकपा एमालेभित्र विवाद छन्, छैनन् अर्को कुरा हो। यो सामाजिक सांस्कृतिक रुपले असाध्यै तलसम्म पुगेको राजनीतिक शक्ति हो। यस्तो शक्तिका जराजुरी उखेलिनु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय जीवनशक्तिमा क्षति पुग्नु हो। तत्काल कांग्रेस वा एमाले भनेर गाली गर्नु स्वाभाविक होला। तर, यिनीहरुले राष्ट्रिय एकता जोगाएका छन्। यसका जराजुरी टुटे भने हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक मुलुकमा ठूलो खतरा आउँछ।’
केही दिनपछि इमेज टेलिभिजनको हटसिटमा सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी अलग–अलग भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने धेरै छन्। यदि यो पार्टी रहेन भने यसको प्रभाव के हुन्छ नेपालको भावी राजनीतिमा? यो देशमा दुईटा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति स्थापित भए, एउटा नेकपा एमाले, अर्को नेपाली कांग्रेस। यी दुवै प्रजातान्त्रिक शक्ति हुन्। देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्ति हुन्। यी दुई शक्ति कमजोर भए भने देशमा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा हुन्छ।’ नेपाल लाइभबाट